Akụkọ - Kedu ka esi eme ọnụ ụzọ ahụ
Ndị otu YALIS
Njikwa ọnụ ụzọ ime
Njikwa Ọnụ ụzọ Minimalist
Ijikwa ọnụ ụzọ ọgbara ọhụrụ
Aka ọnụ ọnụ okomoko okomoko
Slim Frame Glass Door Handles
Aka ejiri aka na -egbochi ụmụaka
Ngwa Ngwa Door
Ndị na -akwụsị ụzọ
Imekọ ihe ọnụ
Onye nkesa YALIS
Onye nrụpụta ụzọ
Onye ọrụ ngo
Ndị otu R&D
Ọmụmụ nke aka ọnụ ụzọ
Oge ọ bụla ị pịrị aka ụzọ imepe ọnụ ụzọ, ị chetụla echiche banyere ọkwa nke aka ụzọ a ga -esite na mmalite wee pụta n'ihu gị? N'azụ aka ọnụ ụzọ bụ mbọ siri ike nke ndị na -ese ihe na nka nka nke ndị omenkà.
Ọmụmụ nke ụdị ọ bụla sitere na mkpali mkpali nke onye nrụpụta. Mgbe onye nrụpụta weghaara mmụọ nke oge a, ọ na -ahapụ ya na eserese imewe. Mgbe ọtụtụ ntụgharị na ndozi nke nkọwapụta nke mbụ, anyị ga -egwu ihe ngosi 3D iji nyochaa ma gbanwee mmetụta aka nke aka ụzọ. Ezi ogidi ụzọ ga -enwerịrị ọ bụghị naanị ịhazi ihe ịchọ mma, kamakwa buru n'uche mmetụta eji aka nke ụzọ ahụ eme, ka imewe ahụ wee nwee ike nwekwuo obi mmadụ.
Mgbe ekwenyechara eserese ikpeazụ, onye injinia na -eme eserese 3D dabere na eserese ime na nna ukwu ebu na -akwado nkọwa nke ebu ahụ, wee malite mmepe nke ebu. Mgbe ọ na -abịa n'ọkwa ụzọ T1 trail, onye injinia na -emezi nke ọma dịka ihe nlele T1 si dị, wee mezie nnwale nnwale T2. Tinyegharịa usoro ndị a dị n'elu ruo mgbe ntụzịaka nzọ ụkwụ ga -emezu ihe achọrọ. Mgbe emezigharịrị ebu ahụ, mmepụta ụzọ ga -amalite. Ọ bụrụ na imepụta trail abụghị nsogbu, enwere ike itinye ebu ahụ n'ọrụ.
N'iji 3# zinc alloy nke nwere 0.042% ọla kọpa dị ka akụrụngwa, a na-agbaze ya na oke okpomoku wee tinye ya n'ime ebu, wee jiri igwe ịnwụ anwụ 160T ruo 200T maka 6s iji nweta nkenke na ịdị elu dị elu. nwụọ. Aka ọnụ ụzọ anaghị adị mfe n'ụdị n'oge nhazi ọzọ, enwere ike melite ịdịte aka n'oge eji ya eme ihe.
Mgbe nkedo nke anwụ na -amalite nhazi mbido, mgbe ahụ, a ga -arụ ọrụ polishing. Iji meziwanye arụmọrụ polishing, YALIS na -eji nchikota igwe eji arụ ọrụ akpaaka na polishing iji hụ na arụmọrụ na ịdị mma nke polishing, n'ihi na ịdị mma nke polishing na -ekpebi ịdị mma nke akwa elektrọn.
A ga -ezipụ oghere ndị a na -egbu mara mma maka electroplating iji gbochie oxidation nke aka ụzọ. Iji melite nguzogide ọxịdashọn na nchapụta nke ọnụ ụzọ. A ga-ejikọ ọnụ ụzọ ọ bụla na akwa 7-8 nke electroplating na okpomọkụ nke 120 ℃ -130 ℃, a ga-ewusi ọnụ ụzọ nyocha mma ike iji gbochie ịmalite ngwaahịa ọnya, ngwaahịa ebili mmiri na ngwaahịa adịghị mma.
Mgbe nhazi nhazi usoro, a na-akpụzi ụzọ ụzọ, mgbe ahụ, ọ na-enyocha nyocha nke akwa site na akwa yana nzukọ nke ihe owuwu, mgbe ahụ, a na-akwakọba ya ma nyefee ya puku kwuru puku ndị ahịa. Aka ọ bụla ị na -emetụ na ndụ gị kwa ụbọchị bụ aka ọrụ pụrụ iche.
YALIS Desig bụ ọkachamara aka na-arụpụta ihe nwere ahụmịhe afọ 10 yana njikọta R&D, mmepụta na ire ahịa.
Oge ezipụ: Mee-08-2021
NDỤMỌDỤ n'efu +86 135 6061 4928
ADDRES Rd Songbai No.77, Mpaghara Mpaghara Hefeng, Obodo Xiaolan, Zhongshan City, Mpaghara Guangdong, PRChina 528415
Ozi ịntanetị info@yalisdesign.com